जापानी आतिथ्य! Tthe जापानी सेवा "Omotenashi" को आत्मा मा - Best of Japan
जापानी शैली वेट्रेस सेतो पृष्ठभूमि = शटरस्टकमा पृथक गर्दै
यस पृष्ठमा, म जापानी आतिथ्यको भावनाको बारेमा व्याख्या गर्नेछु। जापानमा, अतिथि सत्कारलाई "ओमोटिनेशी" भनिन्छ। यसको आत्मा चिया समारोहबाट आएको भनिएको छ। जे होस्, म तपाईंलाई यहाँ एउटा अमूर्त कथा भन्न गइरहेको छैन। म केहि YouTube भिडियोहरू मार्फत जापानी आतिथ्यका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि यदि तपाइँ जापान आउनुभयो भने तपाईले यसलाई हेर्नुहुनेछ र सुन्नुहुनेछ।
जापानी अतिथि सत्कारको उदाहरण
किन जापानी जनता आतिथ्यको भावनामा सेवा गर्छन्?
सबै भन्दा पहिले, कृपया निम्न भिडियोहरू हेर्नुहोस्। यी भिडियोहरूको साथ, तपाईं विभिन्न परिस्थितिहरूमा जापानी अतिथि सत्कारको उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ।
जापानका धेरै मानिसहरू आतिथ्यको हृदयले काम गर्छन्
जापानमा, धेरै कर्मचारीहरू रेस्टुरेन्ट र होटलहरूमा मुस्कानका साथ अतिथि सत्कार गर्छन्। ग्राहक सेवा म्यानुअल अनुसार काम गर्दा पनि, तिनीहरूले थोरै आफ्नो ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट गर्न को लागी कोशिश गर्नेछन्।
अवश्य पनि, केहि कर्मचारीहरूको कुनै प्रेरणा हुँदैन। यद्यपि जापानमा मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरु मुस्कुराएर सेवा गर्न खोजिरहेका छन् जतिसुकै गाह्रो भए पनि।
यो प्रवृत्ति रेस्टुरेन्ट र होटेलमा सीमित छैन। अर्को, ग्यास स्टेशनको भिडियो हेरौं।
जापान मा, धेरै उद्योगहरु मा धेरै मानिसहरु लाई आतिथ्य को भावना छ कि उनीहरु लाई ग्राहकहरु को सेवा गर्न को लागी छन्।
जापानमा पनि, सेल्फ सर्विस प्रकार ग्यास स्टेशनहरू हालै वृद्धि भइरहेको छ। त्यस्ता प्रकारका ग्याँस स्टेशनहरूको साथ, तपाईं यस जस्तो ग्राहक सेवा अपेक्षा गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यद्यपि ग्यास स्टेशनहरू जुन सेल्फ-सर्विसेज छैनन्, त्यस्ता सेवाहरू व्यापक रूपमा निःशुल्क रूपमा गरिन्छ। यदि तपाईं भाडामा कारहरू toण लिनको लागि योजना गर्नुहुन्छ भने, ग्यास स्टेशनबाट रोक्नुहोस् जुन ईन्धन भरिरहेको बेलामा "सेल्फ" चिन्ह हुँदैन, यी सेवाहरू हेर्नुहोला!
एयरपोर्टमा ग्राहकका लागि हवाइजहाज निरीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूले प्रस्थान गर्ने विमानतर्फ आफ्ना हातहरू फहराए। सायद त्यहाँ धेरै यात्रीहरू छन् उनीहरूलाई याद गर्न। यद्यपि, कर्मचारीहरूले यात्रीहरूलाई याद गरे कि नगरे पनि केही फरक पर्दैन र स्वेच्छाले हात मिलाउनुहुन्छ।
मलाई लाग्छ कि यहाँ जापानी आतिथ्य को भावना को एक ठूलो विशेषता छ। अर्को शब्दहरुमा, यो उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छैन कि तिनीहरु ग्राहकहरु द्वारा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको लागि के गर्न सक्छन्।
अमेरिकी शैलीको पसलहरूमा पनि, जापानी स्टाफ सेवा मुस्कुराउँदै यस फिल्ममा देखिएको छ।
मलाई लाग्छ कि आतिथ्यको भावना सबै देशहरूमा समान छ। मैले पश्चिमी होटेल इत्यादिमा धेरै पटक उत्कृष्ट सेवा प्राप्त गरें। यी अनुभवहरूबाट, म पश्चिमी आतिथ्यमा धेरै गहिरो आध्यात्मिकता महसुस गर्छु। यद्यपि जापानमा यति धेरै उद्योगहरू छन्, यति धेरै कर्मचारीहरू ग्राहकहरूको मनोरन्जनका लागि प्रयासरत छन्। मलाई लाग्छ यो बिन्दु जापानको विशेषता हो।
जे होस्, मलाई लाग्छ जापानी आतिथ्यमा एक कमजोर बिन्दु छ। ग्राहकहरूको सेवा दिंदा, जापानी मानिस जोड दिन्छ कि उनीहरु चम्किलो र मुस्कुराइएका छन्। यद्यपि, उनीहरू कत्ति मुस्कुराइएका छन्, ग्राहक सन्तुष्ट हुनेछ कि हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित छैन। उदाहरण को लागी, जब होटल मा एक ग्राहक रेस्टुराँ को लागी मार्ग सोध्छन्, यदि कर्मचारी सही तरिकाले बताएनन् भने, ग्राहक असन्तुष्ट हुनेछन्। विदेशबाट आएका कतिपय यात्रुहरूले वास्तवमा कहिलेकाँही त्यस्तो गुनासो गर्छन्।
मलाई पहिले एक विदेशी पर्यटकले सोधेको छ, "जापानी मानिस किन यस्तो मुस्कानको साथ ग्राहकहरुको सेवा गर्न सक्षम छन्?" त्यतिखेर म उसलाई राम्रो उत्तर दिन सक्दिन। म अझै स्पष्ट जवाफ दिन सक्दिन। यद्यपि मलाई लाग्छ कि धेरै जापानीहरु वरपरका मानिसहरुसंगको सद्भावको कदर गर्छन्। मलाई लाग्छ कि यो निश्चित छ कि धेरै जापानी मानिसहरूले उनीहरू वरिपरिको मानिसहरूलाई सहजै महसुस गराउने कोशिश गरिरहेका छन्।
जापानी भाषा सिकाइएको छ कि यो हाम्रो स्कूल वरिपरिको मानिसहरूलाई सेवा गर्न अनमोल छ। उदाहरणका लागि इलिमेन्टरी स्कूलमा हामी आफैंले आफ्नो कक्षा कोठा र शौचालय सफा गरिरहेका छौं। हुनसक्छ, त्यस्तै चीजलाई पृष्ठभूमिको रूपमा मान्न सकिन्छ। निम्न भिडियोले जापानी बच्चाहरू प्राय: स्कूलमा गरेको काम प्रस्तुत गर्दछ। ठिक छ, हाम्रो लागि यो सामान्य छ, तपाईंले यो भिडियो हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?